राँको बाल्दै जुम्लावासीले भने- डा. केसीको माग पुरा गर्न सरकारको चेत खुलोस | Nagarik News - Nepal Republic Media
जुम्ला– १८ दिनदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको सघन उपचार कक्षमा अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको पक्षमा गठित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक राजबहादुर महत साउने संक्रान्तिका बेला जुम्लीका घरघरमा आगोको राँको बाल्ने तयारी भइरहँदा सदरमुकाम खलंगाको बालमन्दिर नजिकै विधिवत रुपमा राँको बाल्दै थिए। यहाँका अगुवा नागरिकलाई भेला गरेर व्राह्मण बोलाएर डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न र माग संवोधनका लागि सरकारको चेतना खुलोस भन्ने कामना गरे।
उनले भने, सरकारको दम्भ यो राँकोले हटाओस्, मेडिकल माफियालाई गलाओस र डा. केसीको जीवन रक्षामा सरकारको ध्यान जावस भन्ने कामना गरेका छौं, सामूहिक रुपमा गरिएको यो प्राथनाले सरकार गलोस, डा. केसीको माग पुरा गर्ने सद्बुद्धि पलाओस।
नेपालका प्राचीन संस्कृतिअनुरुप साउन १ गते साँझ घर घरमा लुतो फाल्ने प्रचलन छ। सरकारमा डा. केसीप्रति देखिएको नकरात्मक सोच अन्त्य गर्न राँको बालेको नागरिक समाज जुम्लाका सचिव सरोज शाहीले बताए। उनले भने, गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचारी मौलाउँदा सरकार मौन भएर बस्छ, जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा वकालत गर्ने डा. केसी मार्न चाहन्छन, त्यो सरकारी रवैयाको अन्त्य गर्न यो संक्रान्तिले सहयोग पुर्याउने छ।
परम्पराअनुसार काग भलायो, कुकुरडाइनो, लुतेझार, पानीसरो, रातपातेजस्ता औषधीय गुण बोकेका वनस्पतिका साथै कागती, निबुवा, अम्बा, अनार, नासपाती आदि फलफूलसहित कण्डारक नामक राक्षसको पूजा गरी घरको चारैतिर बलिरहेको अगुल्टो फ्याँक्ने गरिन्छ। डा. केसीको मागमा वर्तनमा ओली सरकार राक्षस सावित छ, उनले भने, यो दानवीय व्यवहार अन्त्य गरेर मानविय व्यवहार पलाउने अपेक्षासहित राँको बालिएको छ।
लुतो फ्याँक्दा नाङ्लो ठटाउने, शंख फुक्ने, घण्टा बजाउने, ढिँकी कुट्ने र एकछिन घरको ढोका बन्द गर्ने चलन छ। सरकारसंग भएको दम्भ र मपाईत्व अन्त्यका लागि जुम्लावासीले प्राथना गरेका हुन्।
पछिल्ला समयमा लुतो फ्याँक्ने प्रचलन हराउँदै गएपनि केही धार्मिकस्थलमा सामाजिक रुपमै लुतो फ्याँक्ने संस्कृृति मनाउने गरिएको छ। सौर्यमानअनुसार सूर्य दक्षिणतर्फ सरी कर्कटरेखा माथि जाने भएकाले साउने सङ्क्रान्तिलाई कर्कट सङ्क्रान्ति भन्ने गरिन्छ। जुम्लामा यो संक्रान्तिमा एक आपसमा छिमेकीबीच गाली गरे रोग हट्ने विश्वास छ। जुम्लावासीले पनि राँको बाल्दै डा. गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न, डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न दबाब दिएका हुन्।
‘संस्कार अनुसार सरकारलाई नालायक सरकार मुर्दाबाद, वार्ताका माध्यमवाट स्वास्थ्यका विकृति हटाउन सहयोग गर, केपी सरकार बहिस्कार लगायतका नारा लगाउँदै सरकार माथि जुम्ली खनिएका हुन्। कृषिप्रधान देशमा ‘मानो खाई मुरी उब्जाउने’ प्रचलित कथनअनुसार असार महिनाभर गरिएको खेतीपातीका कारण थाकेका किसान हिलोमैलो पखाली घरपरिवार र आफन्तका साथ रमाइलो गरी यस दिन भोज खाने गर्छन्।
असारभर गरिने खेतीपातीका क्रममा हिलोका कारण फैलिन सक्ने छालाको रोग बाट मुक्ति पाउन साउने सङ्क्रान्तिका दिन साँझ लुतो, दाद आदि रोगबाट मुक्ति पाउन लुतो फाल्ने प्रचलन छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०७५ १९:२६ मंगलबार